El Diablo: wajiga dhabta ah ee jilaaga Martin Acero (sawiro) - HALKAN KA SAMEE
El Diablo: wajiga dhabta ah ee jilaaga Martin Acero (sawiro)
Noqo ficil waa masuuliyad culus. Dad badan oo daawadayaal ah ayaa u haysta in doorka filimka inuu yahay shaqsi uu jilaa sidoo kale ku dhaceyso nolosha dhabta ah.
In kasta oo jilaa uu dejinayo door kasta oo loo xilsaaray isaga. Xun, naxariis, xishood, silsilad, kibirsan, taajir ama faqiir. Waa sharciga shineemo.
Markaa, Martin Acero oo magaciisa dhabta ah Miguel Varroni ciyaaray doorka kibirka, hamiga iyo ninka khiyaanada ah ee taxanaha "El Diablo". Kaas oo dhaawacay sumcadiisii ​​daawadayaasha. Laakiin jilaa ma runtii sidaas oo kale nolosha dhabta ah?
Nolosha: Duurjoogta - Qeybta 36 • VF -…
Bog la xaqiijiyay
Novelas: EL DIABLO EPISODE 68 IN FRENCH Dhimashada Angel -…
Miguel Varroni wuxuu sidaa ku qiray wareysiga in uusan sidaa u xunayn: Ma ihi ninkaas xun ee aad moodo inaad tahay. Kaliya waxaan ciyaaray doorkeyga waxaana qabaa inaan sifiican u ciyaaray. Waxaan hayaa haweenayda aan u adeego oo aan anigu ixtiraamo oo aan dunida ugu lahayn wax kale oo aan uga tegi doonin oo aan mid kale uga tegi doono.
Jilaa weyn ayaa isguursaday ilaa 1997. Oh! In muuqaalku yahay mid marin habaabin ah. Wuxuu guursaday Catherine Siachoque oo ah hooyada Catalina iyo xaaska Albéro taxanaha "Catalina". Amaa, 23 sano oo wada noolaashaha ninkan xun! Wow tani waa in dib loo eego…
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore: https://afriqueshowbiz.com/telenovelas-de-la-serie-el-diablo-le-vrai-visage-de-lacteur-martin-acero-photos/
COVID-19: Daawooyinka Adeegso aalado internetka ah oo lagu bixiyo adeegyada
AU waxay ka joojisay South Sudan howlaheeda 9 milyan oo doolar oo dib u dhac ah
Novelas: Duurjoogta - Qeybta 36 • VF - Video
Novelas: EL DIABLO EPISODE 68 IN FRENCH Dhimashada Angel - Video
Novelas: Duurjoogta - Qeybta 37 • VF - Video